GOS-P3: Inyocha Google Open Source - Nkebi 3 | Site na Linux
Na nke a nke atọ nke usoro isiokwu a banyere «Google Open Source » Anyị ga-anọgide na-enyocha katalọgụ sara mbara ma na-eto eto nke ngwa emepe emepe nke Teknụzụ Giant de «Google ".
Iji nọgide na-ịgbasa ihe ọmụma anyị banyere emeghe ngwa weputara nke obula Ndị Refeyim si otu a maara dị ka GAFAM. Ihe, dị ka ọtụtụ ndị maraworị, bụ nke ụlọ ọrụ North America na-esonụ: "Google, Apple, Facebook, Amazon na Microsoft".
Mgbe, inyocha Previous 2 akụkụ nke usoro isiokwu a Nwere ike pịa njikọ ndị a:
GOS-P2: Inyocha Google Open Source - Nkebi 2
1 GOS-P3: Isi mmalite Google - Nkebi 3
1.1.1 Igwefoto Lee
1.1.3 Kọlịflawa Vest
GOS-P3: Isi mmalite Google - Nkebi 3
Ọ bụ ọba akwụkwọ sọftụwia ochie, ugbu a ejirila Jetpack CameraX dochie ya nke ebumnuche ya bụ inyere ndị mmepe gam akporo aka ịgbakwunye ọrụ igwefoto. Ọ chọrọ ọkwa API 9. Ọbá akwụkwọ ahụ na-eji igwefoto 1 ihe API dị site na 9 ruo 20, yana maka igwefoto 2 otu ọkwa API n'elu 21. N'ime atụmatụ ya bụ: Ihe nlele igwefoto site na itinye ya na nhazi XML na nhazi site na àgwà, dị ka akụkụ ruru (ngwa: aspectRatio), akpaka na-elekwasị anya (ngwa: autoFocus) na iji Flash (ngwa: flash). lee ihe na: Isi mmalite Google y GitHub.
Ọ bụ sistemụ na-enye ebe yana nkewa (SLAM) n'otu oge na 2D na 3D gafee ọtụtụ nyiwe na nhazi ihe mmetụta. Ewubere ya maka ikpo okwu azumazu Google, iji nweta nbudata oge na akuku uzo na 5 cm mkpebi. Nsonaazụ nnwale na atụnyere ụzọ ndị ọzọ amaara na-egosi na, n'ihe banyere ịdị mma, Cartographer na-asọmpi na usoro ndị e guzobere. Yabụ, eji ya na Google Street View iji maapụ ime ụlọ. lee ihe na: Isi mmalite Google y GitHub.
A mgbake isi jide ngwọta. Ebumnuche nke oru a bụ ịhazi njikwa azụmaahịa azụmaahịa nke teknụzụ ezoro ezo disk. Ihe oru ngo a malitere na nkwado FileVault 2 maka Mac OS X, ma mesịa gbakwunye nkwado maka BitLocker (Windows), LUKS (Linux) na Duplicity. Ọ na-enyekwa, n'etiti ihe ndị ọzọ, ohere nke itinye nkwụghachi mgbake na akpaghị aka na sava Google App Engine yana inyefe ohere iji nweta mgbake igodo ka enwere ike mepee ma ọ bụ gbanwee. lee ihe na: Isi mmalite Google y GitHub.
Ọ bụ ntọala ugbu a maka ihe nchọgharị weebụ mechiri emechi nke Google akpọrọ Google Chrome. Ya mere, ọ bụ ụdị mepere emepe, nke pụtara ìhè, nchekwa, ngwa ngwa ma kwụsie ike. Mgbe ọ malitere, ọ wetara ụdị nchebe sandbox, interface njirimara dị ntakịrị, yana njikwa windo tabbed nke ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ nabatara kemgbe ahụ. Chromium bụ oge ndabere nke ihe nchọgharị weebụ kachasị dị ugbu a, nke siri ike ma rụọ ọrụ ọ tụgharịrị na ọbụnadị ụdị ihe nchọgharị MicroSoft nke aka ya, Edge dabere na ya ugbu a. lee ihe na: Isi mmalite Google, repo y Websaịtị.
Ọ bụ ngwa ngwanrọ emepụtara iji gbanwee ma gbanwee koodu n'etiti nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkọwa okwu nwere ike itinye ya n'ọrụ dị ka mgbe ọrụ gụnyere itinye nchekwa nchekwa na nchekwa ọha na mmekọrịta. N'okwu ahụ, Copybara chọrọ ka a họrọ otu n'ime ebe nchekwa ka ọ bụrụ nchekwa ikike, nke mere na enwere eziokwu mgbe niile. Agbanyeghị, ngwa ọrụ a na-enye ohere itinye aka na nchekwa ọ bụla, yana enwere ike iji nchekwa ọ bụla belata ụdị. lee ihe na: Isi mmalite Google y GitHub.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na nke atọ a ịgagharị nke «Google Open Source», na-enye ngwa dị iche iche na-atọ ụtọ ma dị iche iche mepere emepe nke teknụzụ Giant nke «Google»; na ọ bụ nke nnukwu mmasị na ịba uru, maka dum «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GOS-P3: Inyocha Google Open Source - Nkebi 3
FreeFileSync: Mepee Isi mmalite ngwa iji mekọrịta faịlụ na folda